GRC Sommth surface-GRC Sommth surface-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
GRC isiphelo esiphakamileyo
IBhodi ye-Acoustic yeGRG
Iphaneli ye-GRC egcinwe ngumlilo
I-TCP yoBugcisa boMculo
Iphaneli emiselweyo yemvulophu
Amatyala eProjekthi yeTshayina
Amatyala eProjekhthi yangaphandle
GRC Umgangatho womnxeba
Ulapha : Ikhaya>imveliso>GRC isiphelo esiphakamileyo>GRC Umgangatho womnxeba
Indawo yokuqala: I-Nanjing, Jiangsu, China
Igama lebrand: Beildia
Inani Model: GRC indawo egudileyo
I-GRC (iglasi yeClass Re Informed Concrete) ikwabizwa ngokuba yi-GRC. Igama layo lesiTshayina yiglasi yokuqinisa ikhonkrithi. Yisixhobo esiyinxalenye eyisebenzisa udaka lwesamente njengemathiriyeli esisiseko kunye nefibre yeglasi yokulwa nealkali njengesixhobo sokuqinisa. Kwangelo xesha, ikwabandakanya izongezo ezahlukeneyo zokuphucula ukusebenza, ii-pigment, njlnjl. Inkqubo yokuvelisa yeGRC yahluke kakhulu. Ikhonkrithi yeglasi ekhonkrithiweyo elungiselelwe ivuthelwe kwitemplate ngobunono obuhle, obunokuthi baqiniseke ukuba imveliso ifezekisa ukuqina, ukomelela nokuchasana nokuqhekeka. Umgangatho wemveliso oveliswe ngoku wahluke ngokupheleleyo kuleyo yenkqubo yesiqhelo yokubumba ikhonkrithi. EYurophu naseMelika, iphepha elinye le-GFRC lisetyenziswa ngokubanzi njengebhodi yangaphandle yokuhombisa.
ukwenza Iimfuneko zesikhombisi
Ukuthenga ngokulinganayo kwamandla okugqibela / MPa Ixabiso eliphakathi 7
Ubuncinci bebhloko enye 6.2
Amandla okugoba aphezulu / MPa Ixabiso eliphakathi 18
Ubuncinci bebhloko enye 15
Amandla empembelelo / kJ / M2 8
Ubungakanani bomthamo (womile) / g / cm3 1.8
Ukufunxwa kwamanzi 14
Ukuxhathisa okokuqhaqha Emva kwemijikelezo engama-25 yokujikeleza komkhenkce, akubangakho nto ikhohlisayo, ukuphalaza kunye nezinye izinto ezonakalisayo.
1. Ubuninzi beplastiki. Sebenzisa itekhnoloji yokuphonononga umhlaba encinci yeemitha ezintathu, ukuze imveliso ikwazi ukubeka imodeli ngokuchanekileyo, kwaye kwangaxeshanye ivakalise umphumo womhlobiso wolwakhiwo kunye neempawu zokubonakala kulo naluphi na umbala, imodeli okanye ulwakhiwo.
Ukusebenza kokukhusela umhlaba. Ngokwamkela inkqubo ebanzi yokukhuselwa, umsebenzi olwa nokuthomalalisa kunye nokuzihlambulula kuyafezekiswa ngelixa umsebenzi ongamanzi wokuhombisa wemveliso uyaqinisekiswa, kunye nokuqina komgangatho wokuhombisa imbonakalo yoyilo.
3. Ukuqina okugqwesileyo. Ifayibha ephezulu ye-PVA ye-elastis isetyenziswa njengesixhobo sokongeza izinto kumaleko wolwakhiwo lwe-GRC, kwaye ifayibha ye-PP incediswa ukuphucula ukumelana kwamacandelo omgangatho, kuze oko kuphuculwe ukuqina kweemveliso kunye nokwandisa inkonzo yobomi bezakhiwo.
4. Ukukhanya kunye nodonga olunqabileyo. Ukuyilwa kunokuqaphela iimpawu zeepleyiti ezinkulu kunye nodonga olucekeceke, kunciphisa kakhulu umthwalo wokuthwala izakhiwo, zenza ukuba iimveliso zifakwe kwiindonga zangaphandle zezakhiwo eziphakamileyo, zenze ukuba imilo yokwakha ibe bhetyebhetye kwaye ibe nokubonakala okubonakalayo ngokubanzi.
5. Ulondolozo lwamandla kunye nokwehliswa kokukhutshwa: xa kuthelekiswa nezinye izinto ezivalelayo, i-GRC isebenzisa amandla amancinci kwinkqubo yokwenza kunye nofakelo. Abaphengululi baseJapan benze uthelekiso lokukhutshelwa kwekhabhoni phakathi kwodonga lwe-GRC kunye nebhodi eqinisiweyo yodonga, kunye nokusetyenziswa kwodonga lwe-GRC kunciphisa ukuphuma kwekhabhoni nge-30%.
Iziphumo ze-GRC ezifihlakeleyo
I-GRC yokucoca amanzi ngokuhlamba
Iziphumo zokukhonkxa kwi-GRC
Iphaneli edityanisiweyo yoLungiso
Ubunini belungelo lokushicilela © 2020 Nanjing BeiLiDa INkqubo eNtsha yeZinto zeNjineli, Inc.